Waa maxay sababta ay faa'iido ugu tahay beeraleyda gudaha inay quudiyaan alaabada dabiiciga ah - PotatoSystem
Meey 26, 05:05
в Isbeddellada / Isbeddellada, Ecology
Waxaa jira raacsi badan oo dheeri ah oo ah cunnooyin caafimaad leh, laakiin ma cunaan cunno aamin ah? Bioproduct, 100 boqolkiiba dabiiciga ah, bay'ada jawiga u leh - ereyadan ayaa noqday kuwo caan ah.
Soosaarayaasha cuntada ee adduunka oo dhan waxay si firfircoon ugu isticmaalaan halkudhigyo ay ka buuxan yihiin baakado, oo ay macaamiisha u jiidanayaan. Sida ay qabaan khubaro, gudaha Kazakhstan, adeegsiga ereyadan ayaa inta badan ah habka wax soo saarka xiriirka dadweynaha. Alaabta noocan ahi waa inay lahaato shahaado gaar ah. Maanta dalka waxaa ka jira 61 wax soosaarayaal oo ku beero waxsoosaarka dabiiciga dhul kaliya 280 kun oo hektar. Kuwani waa beeraha beeraha ee Akmola, Karaganda, Kostanay iyo Waqooyiga Kazakhstan oo ah kuwa ku-saleysan dhoofinta. Waxay u diraan in ka badan 20 nooc oo badeecooyin dibada ah, oo ay ku jiraan qamadi, flax, lentil, digir, shaciir, canola, bur, saliid qudaar.
Tusaale ahaan, kaliya gobolka Kostanay waxaa ka jira 20 shirkado oo noocaas ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin - 2 kareem.
Waxay heleen shahaadooyin yurubiyan ah ee alaabada la dhammeeyay waxayna ka soo saaraan ashyaa'da ceeriin ee lagu beero beerahooda iyagoon isticmaalin sunta cayayaanka
Dadka ka fog beeraha waxay aaminsan yihiin in waddankeenu soo saaro wax soo saar bey'adda u fiican. Laakiin tani qayb ahaan waa run: qofna ma uusan samayn falanqayn, tusaale ahaan, rooti rooti oo loogu talagalay joogitaanka sunta cayayaanka iyo haraaga lagu buufiyo ee lagu daaweeyo beeraha. Beeraley badan ayaa adeegsada alaabo tayo sare leh oo kiimiko ah, laakiin waxaa jira kuwa, iyaga oo raba in ay yareeyaan kharashaadkooda goosashada, u adeegsada isku darka Shiinaha. Waxaa horey loo caddeeyey inay ku urursan karaan ciidda, isla qamadiga ama dalagyada kale. Tanna waxay ka dhigan tahay, annaga oo aan ka shakinin, innaga oo aan ogayn isaga ayaa nafteena sumeeya.
Sida ay qabaan khubarada cilmu-nafsiga, tirada bukaannadu waxay sanad walba ku koraayaan Kazakhstan, ma ka saaraan saameynta kiimikada haraaga ah ee jirka gala cuntada.
Wadamada horumarsan, xiriirkan ayaa horey loo raad raacay muddo dheer wuxuuna bilaabay inuu si firfircoon uga baxo kiimikada beeraha isla markaana soo saaro badeecooyin dabiici ah. Horumar ayaa ka socda Kazakhstan, laakiin tani waa qayb yar. Beeraha badankood ee kobciya wax soo saarka dabiiciga ah ayaa ah kuwa loo diro dhoofinta. Maxaa ka hortaagan inay quudiyaan Kazakhstanis? Sida ay noqotay, waxaa jira sababo badan oo tan ah.
Ku saabsan baahida loo qabo in lagu beero agabyada dabiiciga ah ee Kazakhstan, ayaa laga hadlay 2013-2014. Waxay ku doodeen muddo dheer, waxay soo jeediyeen soo jeedinno, waxay diyaariyeen Sharciga Beeraha Noolaha, sanadka 2016-na wuxuu bilaabay inuu shaqeeyo. Laakiin beddelkii suuqa gudaha, alaabooyinka ayaa la dhoofiyay oo keliya. Mid ka mid ah sababaha ayaa ah in waddanku aanu lahayn shaybaar lagu fulin karo dhammaan cilmi baaristii lagama maarmaanka ahayd isla markaana uu soo saari karo shahaado, shirkadaha shisheeyena aysan ku deg deg ahayn inay soo galaan dalka sababtoo ah mugga yar awgeed. sidaa darteed Beeraha go'aansaday inay u beddelaan beeraha dabiiciga ah waxay la xiriireen shaybaarada shisheeye. Mid ka mid ah beeraha noocaas ah waa Uspenovka LLP.
"Sannadkii 2015, waxaan helnay shahaadada caalamiga ah waxaanuna ku hawlan nahay soo saarista alaabada dabiiciga ah," ayuu yidhi agaasimuhu beerta "Uspenovka" Anatoly SERGEEV. - Dhamaan daraasadaha muunadaha wax soo saarka waxaa lagu sameeyaa Jarmalka. Oo kaliya ka dib marka la helo natiijooyinka baaritaanka, alaabadayada waxaa loo aqoonsaday inay yihiin dabiici. Kani waa marxaladda koowaad. Markaan badeecada u rarno Yurub, mar labaad ayaa la hubiyaa, oo haddii natiijooyinka tayada aan la xaqiijin, waa inaan soo celino ama aan ku iibinnaa qiimaha caadiga ah. Tani waa geedi socod aad u adag oo aad u dheer. Shahaadada ayaa ah 20 kun oo yuuro, hal falanqayn ayaa ku kacaya 700 euro, oo ay weheliso keenista tusaalaha ee Jarmalka. Kharashaadka gaadiidka waaweyn. Iyo, sidaa darteed, qiimaha alaabooyinka dabiiciga ah ayaa aad u badan doona.
Maxay dadka reer yurub iibsadaan alaabadayada? Tani waa sababta oo ah dadku waxay bilaabeen inay daryeelaan caafimaadkooda. Iyagu mar dambe ma doonayaan inay naftooda sumeeyaan, maxaa yeelay wax kasta oo la sumayn karo, iyagu mar horeba way sumeeyeen. Hadda waxay u diraan sunta oo dhan, anaguna waan ku faraxsanahay in wax soo saarkeenu uu sii kordhayo, tirada haramaha ayaa yaraaneysa. Laakiin hel caafimaad yar. Waxaan u baahanahay inaan caafimaad qab ku sugnaano cunnooyinka nadiifka ah. Ganacsigan wuxuu u baahan yahay in lagala taliyo halkan wadankaaga hooyo.
Maxaa hoos u dhigaya hawsha?
Sida laga soo xigtay Anatoly Sergeyev, wuxuu ku farxi lahaa inuu alaabtiisa ka iibiyo suuqa maxalliga ah. Laakiin waxaa jira dhowr buts ...
"Wax badan ayaan ka wada hadalnaa alaabada dabiiciga ah ee wareega cidhiidhi ah, laakiin waxaan u baahanahay in aan bilowno in aan dadka u sheegno," ayuu yiri shaqaaluhu. - Dadku ma oga waxa alaabada saafiga ahi yihiin. Waxaa loogu yeeri karaa dabiici ahaan, bioproducts ayaa noqon kara. Muwaadiniintu waxay leeyihiin fikrad laga leeyahay: haddii sheygu yahay mid dabiici ah, waxay aaminsan yihiin in lagu koray iyadoo la adeegsanayo haraaga dabiiciga ah, oo ay kujirto digada. Laakiin tani run ma aha. Beeraha beeruhu ma aha oo keliya diidmada loo isticmaalo kimistariga beeraha, laakiin sidoo kale helitaanka shahaadada, iyo sidoo kale kormeer joogto ah oo ay sameysay shirkadda soo saartay.
- Kazakhstan, sharci ayaa la qaatay, waxaa jira heerar loogu talagalay soo-saarka alaabada, sanadka 2019, "Khariidadda Wadooyinka Beeraha Noolaha" ayaa la saxeexay. Waxay umuuqataa inay jiraan wax walba, laakiin waxba shaqeeyaa, - ayaa yidhi madaxweynaha "Ururka Beeraha Noolaha" Vadim LOPUKHIN. - Dalka waxaa ka jira shirkado soo saara badeecooyin dabiici ah, laakiin inta badan waa la dhoofiyaa. Waxa jira dhowr shirkado oo ku hawlan sameynta agabka ceyriinka ee deegaanka iyo soo saarida alaabada la dhammeeyay. Tirada warshadaha noocan oo kale ah waa in la kordhiyaa iyo taageerada ay bixiso gobolka. Dhowr sano ka hor, astaanta qaran ee cuntada dabiiciga ah ayaa la oggolaaday, laakiin maanta sumad-saarkani kuma saabsana alaabadayada. Sharciga ayaa la meel mariyay 4 sano ka hor, laakiin ma bilaabi doonto u dhaqan ahaan sidii ay ahayd.
Sida laga soo xigtay Lopukhin, horumarinta beero abuurka dabiiciga ah waxaa caqabad ku ah 2 arimood - aqoon la’aan beeraleyda iyo macaamiisha iyo suuq gebi ahaanba maqnaanshaha alaabada dabiiciga ah ee dalka. Labadan hawlood ayaa u baahan in wax laga qabto.
Habka lagu soo jiidanayo beeraleyda si ay ugu buuxiyaan suuqa gudaha alaabooyin dabiici ah ayaa la rabay inay ka baxaan dhulka xitaa in ka badan 2 sano ka hor. Markii JSC "Xarunta Qaranka ee Khibradda" ay heshay aqoonsi baaritaan iyo soo saarista shahaadooyinka alaabada dabiiciga ah. Laakiin arrimuhu weli way jiraan: muddadan ma aysan soo saarin shahaado qaran oo keliya.
Xaruntu waxay soo saari kartaa shahaadooyin ku saabsan alaabada dabiiciga ah, laakiin beeralayda ayaan daneyneynin inay helaan shahaadada Kazakhstan, maadaama ay aad u daneynayaan dhoofinta, Dinara URAZBEKOVA, oo ku takhasustay laanta Kostanay ee Xarunta Qaranka ee Khabiirada, oo xubin ka ah guddiga jamhuuriga ee shahaadooyinka alaabada dabiiciga ah. - Beeraleyda ka soo jeeda gobollada koonfurta ayaa noo soo dhowaaday, laakiin waxay soo saaraan tiro aad u tiro yar oo alaabooyin ah, oo helitaankooda shahaado aysan faa'iido lahayn.
Laakiin, wali, meela ballaadhan oo beeraleeydu ma oga in xaruntan oo kale ay dalka ka shaqeyneysey muddo dheer.
Anatoly Sergeyev ayaa yidhi: "Aniga oo ah qof qabanayay shaqo dabiici ah muddo 5 sano ah waxna kama maqal sheybaarka." - In kasta oo aan ku faraxsanaan lahaa in aan helo shahaado qaran. Bacdamaa ay beeraha ka sokow waxaan haystaa dhagxaan waxaan ku siin karaaa burka dabiiciga ah. Waxaa jira meel wax lagu dubto oo aan ku karno rootida dabiiciga ah iyo alaabada kale ee la dubay. Qiimuhu wuxuu noqon doonaa 50-60 boqolkiiba ka qaalisan sidii caadiga ahayd.
Xamaaliyeyaasha Kostanai waxay u direen Wasaaradda Beeraha iyo kooxda ka hortaga tacliinta talooyinka ay soo jeedinayeen ee ku saabsan sidii looga caawin lahaa badeecadaha dabiiciga ah ee guryaha inay gaaraan shelfanka bakhaarada Kazakhstani. Ka mid ah soo jeedinta - baahida loo qabo in la abuuro hannaan cad oo loogu talagalay horumarinta beeraha dabiiciga ah. Waa maxay sababta beeraha leh shahaadooyinka caalamiga ah aysan u aqoonin sida loo helo shahaadada guriga? Waxaa sidoo kale la soo jeediyay in la adkeeyo mas'uuliyadda shakhsi ahaaneed ee mid ka mid ah wasiir ku-xigeennada horumarinta waxsoosaarka alaabada.
Way iska cadahay in mustaqbalku iska leeyahay badeecadaha bey'adda u fiican, laakiin markay tahay Kazakhstanis, weli su’aal weyn baa jirta.
Waxaa daabacay: Tatyana Derevyanko
Tags: Kazakhstanalaabada dabiiciga ahdhoofinta
Waxaa lagu waraabiyaa 30 kun oo hektar oo dhul beereed ah Tatarstan
Dhibaatooyinka beeraleyda ayaa kor u qaadi doona qiimaha